China Double Worm Slewing Drive For Excavator baaldi warshad iyo saarayaasha |Wanda
Summada Qaabka Adeegga Cabbirka Shahaado Xidhmada dammaanad
XZWD Dual Worm Slewing Drive OEM Customized Heerka ISO9001 Kiis alwaax ah 1 sano
Xor baad u tahay inaad nala soo xidhiidho haddii aad wax su'aalo ah ama shuruudo ah qabtid.
1.Haddii aad tahay macmiil iibsanaya alaabooyinka caadiga ah, fadlan kala tasho adeegga macaamiisha sawiro faahfaahsan
2.Haddii aad u baahan tahay badeecooyin la habeeyey, fadlan ii soo dir sawirka wakhtiga, oo waxaan kuu samayn doonaa wakhtiga xigashada iyo wax soo saarka.
3. Fadlan xor u noqo inaad ila soo xidhiidho haddii aad wax shuruudo kale ah qabtid.Waxaan kuugu jawaabi doonaa waqtiga.
Waad ku mahadsan tahay daawashada alaabtayada, jawaab celintaada si weyn ayaa loo mahadcelin doonaa.
1.Waxyaabaha ceeriin ee alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoon yahay;
1. Waxaan bixinaa alaabooyinka caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn;
2. Waxaan bixinaa muunado gaar ah, sawiro la habeeyey, khariidad albaab-ilaa-albaab ah iyo adeegyo kale;
3. Waxaan bixinaa adeegyo kala duwan, oo ay ku jiraan naqshadeynta, habaynta, baakadaha, gaadiidka, iwm.
Waxaan u dhigi doonaa wax soo saarka ugu fiican oo siin doonaa macaamiisha waayo-aragnimo codsiga qanci sida gool our joogto ah.Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan isticmaalno xirfadaheena xirfadeed si aan u siino macaamiisha alaab tayo sare leh, waxaana rajeyneynaa in iyada oo loo marayo wadashaqeyn joogto ah, kor loogu qaado isfahamka iyo isgaarsiinta, oo aan gaarno xaalad guul-guul ah.
1. Buuxinta saliid aan miridhku lahayn
2.ku xirid lakabyo ilaalin ah
3.Go'an in kiiska Plywood, Pallet, jir bir ah
Fadlan xor u noqo inaad la xiriirto adeegga macaamiisha haddii aad wax su'aalo ah ama shuruudo ah qabtid.
Waxaan ballan qaadeynaa in adeegga macaamiisheena uu kuugu soo jawaabi doono 24 saacadood gudahood.
Hore: XZWD Stock Slewing Drive Gear Gear Drive oo leh wakhti gaaban oo dhalmo ah
Xiga: 2021 moodeel yar oo aan gear lahayn
Haydarooliga Motor Slew Drive
Nidaamka Dabagalka Qorraxda Dilaaga
Gooryaanka Wadista Garaaca Garaaca Garaaca
Giraanta wax lagu dilayo Dirxiga
wadida dilaaga ah ee raadraaca qoraxda oo wata 24V DC motor